Forte Dei Marmi, Italy: ukubuyekezwa kanye izinkomba
Tuscany, lapho kudabuka khona lolu omkhulu uLeonardo da Vinci, Dante, uMichelangelo ezidumile emhlabeni wonke ensembles yayo emlandweni futhi yokwakha, iwayini emangalisayo, okungcono amafutha omnqumo zokungcebeleka emangalisayo. Esinye sezipho ezinhle kakhulu - Forte Dei Marmi. Italy Sekuyisikhathi eside wavakashela abaholi Russian. Kodwa yiso kanye kule ndawo yeholide ingumnikazi ezingaphezu kuka-30% mansions Villas. Lokhu resort ezicini zonke kulabo bathanda uphumule royally. Ake uhambe kancane emigwaqweni yayo, ogwini, sibheke ezinye amahhotela kanye nezitolo.
Forte Dei Marmi itholakala ogwini Sea Tyrrhenian esifundazweni Versilia Lucca. Yena muhle, ozungezwe uhlaza siluhlaza, izimbali ezinephunga elimnandi kanye ulwandle, emangalisayo tinkling imithombo. Kodwa edolobheni kwakho lincane kakhulu kangangokuthi abaningi abawubiza ngokuthi kuye emzaneni. Ophakathi nendawo endaweni enhle, okuvela kulo, efana imisebe kwelanga ku umdwebo kwengane, Amathuba ehlanzekile emnandi kuzo zonke izitaladi izici. Omunye wabo okuthiwa Roma Imperiale. Lona lapho ungabona izindlu eziningi Russian Nouveau Riche. Ngokusho azungezwe ndawo kanzulu ehlonishwayo boutiques ezibizayo futhi zokudla, kodwa pho kunani sasiqhubeka, ezibizayo kancane futhi kulula. Kude nomuzi kukhona amanani ezinhle futhi ngempela yeningi esuphamakethe. Kukhona e Forte Dei Marmi nesitimela / sesitimela lapho isikhungo km 3.5 nje kude. Ungathola khona ngezinyawo, bephuma (mayelana 40 imizuzu), ngeteksi zamabhasi (uya njalo ngehora). Isiteshi inikeza izitimela ukuba emadolobheni amaningi Italian - Milan, Pisa, Genoa, kanye nabanye. Kodwa iningi lonke eya izimoto emabhayisikili. sipho sabo ukuqasha Amahhovisi elise emigwaqweni.
Umbuzo obalulekile-ke labo abaye bakhetha iholidi of Forte Dei Marmi: ". Ukuthola khona" ongakhetha eziningana - izindiza, izitimela, amaloli kanye nemikhumbi. Eliseduze sezindiza ezinkulu, okuyinto yaqanjwa uGalileo Galilei itholakala Pisa. Kusukela ku-resort 20 km (kusukela imikhawulo idolobha). Ngezinye 5 km kukhona sezindiza ezincane ngotshani zezindiza. Izindiza khona nje ubuke. Ngemoto e Forte Dei Marmi engafinyelelwa kusuka kuphi eYurophu. Lena bangaki zivela eRussia. Kufanele qhubeka A12 onguthelawayeka isiqondiso Versilia pointer, ngemva kwalokho jikela ngakwesokudla. Qhubekela Ilobhothi lwesithathu, futhi ukuze ujike kodwa ngakwesobunxele, futhi sithuthele edolobheni kakade. Indlela izibalo: kusukela Lucca ukuba resort 30 km kusuka Milan, 250, 80 kusukela Florence, Rome 300. idolobha ngamunye ithrekhi lalo. IMilan inezinto A1, lapho ulandele kuze kube Fidenza, bese uya ku-A15 La Spezia bese kakade A12. Kusukela Florence phezu A11 kuze kube Lucca, bese uvule Viareggio. Kusukela eRoma A1 ukuba Florence, bese ngaphansi kohlelo ngenhla. Imbobo itholakala Viareggio, endaweni efanayo futhi isitimela / esiteshini. Ngu ulwandle ukuze resort engafinyelelwa kusukela emadolobheni amakhulu Italy. Imininingwane, kuyinto efiselekayo ukucacisa izinombolo ezilandelayo: 0584 444440584, 0584 89826, 0584 320330584 32033.
A emangalisayo ngamaholidi unika izivakashi zayo Forte Dei Marmi. E-Italy, ikakhulukazi eningizimu, udume nelanga ophanayo. Kodwa kule ndawo yeholide esidumile off-inkathi futhi ebusika imvula njalo. Kodwa Engxenyeni yesibili May kuya ekupheleni kuka-September, izinsuku eziningi kukhona libalele futhi efudumele. Ayikho ukushisa, izinga lokushisa cishe aliphumi ngenhla 28. Kodwa uma wesibhakabhaka namafu pokapyvaet imvula, mercury uwela + 20 + 23. Winter kulezi zingxenye bavame "bazitike" denechki izivakashi kancane ngakho yezimvula.
Emabhishi Forte Dei Marmi, bonke ngothi lwabo uwuhlomele kahle. Sandy Beach Resort Indawo abantu, lapho njalo ekuseni esihlabathini is sifted abasebenzi, ezivame kangaka kwamanye amabhishi "nelezinkunzi" namakepisi nobhiya lapha akwenzeki. Ukungena emanzini cishe wonke flat, elula kakhulu izingane. Kodwa amanzi alucacile (ngenxa plankton sendawo). Ngo sezulu kunomoya eduze nogu ungabona izimila zasolwandle, futhi engxenyeni July yesibili kukhona jellyfish ngempela okuhlabayo. Kodwa Luhambo ezithakazelisayo kakhulu emabhishi akuleli - intengo. Mahhala ingatholwa at ibanga 2-5 km kusuka edolobheni. Inzuzo yabo - cishe leso sihlabathi amanzi, njengoba kuzo zonke abanye. Ububi - kwatheleka izixuku zabantu. Sunbathers ziningi kangangokuba ngezinye izikhathi ayikho indawo hhayi kuphela ukuba aqambe amanga, ngisho nokuhlala phansi. Ngaphandle komasipala, mahhala kungase kubonakale amabhishi amahhotela ugu, yebo, ngoba izivakashi zayo. Kungani kubonakala? Ngoba lonke kubo likhona segumbi. Labo abangavumelani nenhlanhla ukuhambisa ehhotela emgqeni 1st, elinde okunethezeka premium resort amabhishi. Beka endaweni lounger futhi isambulela phansi kwelanga okufudumele Italian kubiza kuze kube-euro 100 ngosuku. Kombhede efanayo sun bed plus itafula futhi Cabanas kuwufanele kusuka 300 euro ngosuku. Konke ezikhokhelwayo khulula amabhishi - Negros, njalo ephoqelela izimpahla zabo. Kuphela ebhishi nudist, kokuba igama elihle of Santa Maria, lena kangcono. Lokhu beach ngisho Forte Dei Marmi kubhekwe elite kakhulu. Yena njalo ithola Blue Maka ngokuhlanzeka, enakho, kodwa Makungaphuthi zonke, okungukuthi, kukhona feyspropusk olubucayi.
Forte Dei Marmi kuyinto resort eqolo. Ngakho, zokudlela akuzona ezishibhile. Imenyu zonke eyabo, kodwa ngemuva jikelele izitsha - pasta, i-pasta (pasta okufanayo, ezincane kuphela), inhlanzi, ukudla kwasolwandle, imifino kanye pizza. Wines ahlinzekwa yonke indawo enhle kakhulu, abiza ihluke kakhulu kwethi eziphansi ngokwesilinganiso 30-50 euro ibhodlela ngayinye elite, ubani okucelayo euro angu-500. Ohlonishwa kakhulu futhi yisakhiwo sodumo kakhulu kubhekwa yokudlela Gilda, lapho kukhetfwa izitsha ngandlela-thile, kodwa kakhulu izimfanelo ukunambitheka. Eyesibili ethandwa kakhulu yokudlela Bistrot. Ulimi oluthulayo uphawu encane yokudlela umndeni Enoteca Brilliant, okuyinto emaphethelweni resort. Amanani aphansi, kepha isevisi futhi ukudla top-notch. Zonke iphuzu iIgama e Forte Dei Marmi avulekele ekuseni kusuka 12-30 kuya 14-30, futhi kusihlwa - kusuka 19-00 ikhasimende zokugcina, nakuba zikhona ezinye evaliwe at 23-00. Ezinye zokudla kufanele ukhokhe 6 euro nje yokuthi ehlezi ekudleni.
Amahhotela Forte Dei Marmi
Lapha iningi amahhotela nge 5 futhi 4 izinkanyezi. Nge ezintathu ezincane kakhulu. Lapho ekhetha lolwandle kubalulekile ukuba abe nesithakazelo kule mibandela njengoba kudingeke ukuba ukhokhe ngabo. A ehlukile okuhle kukhona kweziziba, kodwa zingekho zonke ehhotela. Amanani ngekamelo zihluke kakhulu, kusukela 250 kuya ku-2000 ngama-euro 7 nobusuku Igumbi indinganiso abantu ababili ngaphandle izingane. Phakathi ezintathu-star amahhotela wajabulela idumela elihle Ihhotela Franceschi, Ihhotela Bijou, La Pace. Phakathi amahhotela amane inkanyezi kukhona Izibuyekezo efudumele Villa Roma Imperiale, St Mauritius Ihhotela, Ihhotela Goya nabanye abaningi. Asemazingeni amahhotela the resort onikeza ngesevisi ezehlukile, amakamelo zikanokusho, inkonzo enkulu. ethandwa kakhulu Principe Forte Dei Marmi, etholakala ogwini eluhlaza okwesibhakabhaka kolwandle, Grand Hotel Imperiale, wavula ngo 2007, u-Augustus Hotel & Resort - omunye omdala futhi ahlonishwa kakhulu. Ngaphezu ehhotela, kuleli yokungcebeleka, ungakwazi ukuqasha villa isikhathi 1 inyanga.
emakhoneni Abaningi Italy kungaba ukuziqhayisa amagugu zomlando ezithakazelisayo. Izivakashi njalo bakhangwa eRoma, eMilan, Pisa, Florence. Forte Dei Marmi futhi inokuthile ukukhombisa. Yena elandelela umlando layo 1516, nini ukuthumela ekhiqizwa endaweni zemabula eyakhelwe pier. Njalo pirate kuphangwa nzima ngokuziphatha "imisebenzi zemabula 'kuze ku-1788 ngu-Prince Leopold ayizange wakha nenqaba ukuzivikela ngokuthi Forte Dei Marmi, okusho" zemabula'. Lokhu kwaziswa ubelokhu yokufunwa kakhulu, ngakho uma iye yathuthukiswa nasemaceleni Fort edolobheni kancane kancane lakhula. Lawa masayithi, Kugcizelela ne ubuhle kwayo okukhulu, uye wabheka emva yena Italian ngoba azi. Kube wakhela Villas ukunethezeka iholidi zwe. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba yokwakha kabusha Soviet, ngemva kwalokho kwakukhona baseRussia mkhulu kakhulu, eqala ukuhlola izindawo zokungcebeleka ukukhuthalele ukuthenga ingcebo lapha. Kancane kancane, le ndawo isibe elite.
Patron Forte Dei Marmi uNgcwele Hermes (Sant'Ermete), isonto lapho isendaweni eyodwa ezindlela ezibanzi. Ukuze kuhlonishwe lokhu umfel 'ukholo ukugubha omkhulu owenzeka njalo Agasti 28. Kuwufanele ukubukeka futhi phezu lezinyawo, owayekade ebhentshini elingaphansi. Isithakazelo kukhona izinsalela inqaba ukuzivikela, Amahlaya Ihlaya Museum, emafektri zemabula Antique, Villa Puccini. Le ndawo resort Ubuye izakhiwo ezithakazelisayo. Kodwa ezithandwa kakhulu sihambahamba Apuan Alps, alinikela ukubukwa kumnandi of ugu eduze Forte Dei Marmi. Izithombe lezi zindawo ezinhle ukubonisa ukuthi akunakwenzeka ukuba adlulisele ngamagama.
Labo abakujabuleli imisebenzi yangaphandle, e Forte Dei Marmi banganikeza izizinda for ethenga bese uya ezindaweni zokudlela. Kubo bonke abanye abantu, lapha kunikwa ematfuba lamanyenti ukuchitha isikhathi kahle. The yokungcebeleka unethuba ukudlala igalofu, ibhola lomphebezo, i-windsurfing, diving, ngomkhumbi, intaba ekhuphuka, ogibele ihhashi, ngokuvakashela emjahweni. edolobheni ebusuku ukuphila njengoba agqamile ukwahlukahlukana. Kukhona inala kuma-nightclub, ukunikela uhlelo onhlobonhlobo. Phakathi kwalezi zenzakalo kwamasiko zihlabeke usuku ezidumile St noHerme, okuthiwa Puccini Festival, Film Festival, futhi ehlobo ngokuvamile enze iqembu lomculo owaziwa.
amaholide Iningi eminyakeni yamuva Forte Dei Marmi, izibuyekezo mayelana efanayo kwesokunxele. Izivakashi Ukuncoma ubuhle kweziningi zalezi zindawo, ezihlukahlukene ezikhangayo, kodwa cool ukusho mayelana amanani amba eqolo. Kukhona bathini mayelana amanzi akwanele sihlanzeke amabhishi, kanye nazo zonke ezinye kwaphazamiseka Negeri hucksters. Ezinye iholidi baye lapha eminyakeni eyedlule, amaphutha athile waveza ukuthi Yiqiniso, kuyinto ehluke ngokuphelele evamile, kodwa jikelele resort impendulo emangalisayo futhi sibe nombono oqondile kungaphezu. Yokudlela ukhonza okumnandi, amahhotela ozama kanzima ukujabulisa, ezitaladini ubuhle nokuhlanzeka, nasemaceleni lezi namathafa, umoya.
Solar Murcia (Spain): ezikhangayo ukuthi ngeke udumazeke
Inhloko-dolobha ye Tatarstan: kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube sesikhathini esizayo
Gelendzhik, sibhedlela "Blue Wave": iwebhusayithi, isithombe, ukubuyekezwa
Charming - kuyafana ukuthi enhle?
Indlela yokuvula i-air-conditioning Ukushisa? Njengoba conditioner emoyeni usebenza Ukushisa?
Amashalofu izincwadi ngezandla zabo. Ubukhulu of emashalofini zamabhuku
Umthamo Blue-ray disc. Umkhawulo idatha umthamo Blue-ray
UMklomelo KaNobel e Physics: uhlu. zesayensi Russian - uMklomelo KaNobel
Izindiza engcono emhlabeni
Exchange QComment Amazwana: impendulo. QComment.ru: isevisi Amaholo
Rosa Grandiflora: incazelo izinhlobo ethandwa kakhulu
Beautiful futhi kulula manicure ekhaya. imibono manicure
Compound wathungela izingxenye - izindlela eziyisisekelo